बहसमा व्यवस्था परिवर्तन
बारम्बार देखिएका बिकराल संकटहरुबाट देशलाई सधैका लागि मुक्त गर्न आवश्यक छ । एक पछि पुनः अर्को पटक दाहोरिने यी संकटहरुलाई दिर्घकालिन समाधान गर्नुको विकल्प छैन् । यदि यी संकटहरुबाट दिर्घकालिन रुपमा निकास खोजिएन भने देश सधैंभरि संकटमा रुमलिरहने निश्चित पनि छ ।
पंक्तिकार यी संकटबाट देशलाई मुक्ति दिन केहि विकल्पहरु सबै पाठकको बीचमा प्रस्तुत गर्दछ । मुलुकमा निरन्तर संकट ल्याईरहने केहि संरचनाहरुको विकल्प खोज्नु नै अबको निकास हो भन्ने कुरामा पंक्तिकारको स्पष्ट धारणा छ ।
जसले संसदीय व्यवस्थालाई आत्मसात गरे उनैले संसदलाई अर्थहिन बनाउँदै लगेका छन् । संसद निकास दिनेभन्दा पनि समस्या बल्झाउने संरचनाको रुपमा विकास भईरहेको छ । हालको संसद वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार स्वीकार्न पनि नसक्ने, टिकाउन पनि नसक्ने, फाल्न पनि नसक्ने र अर्को सरकार बनाउन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । संसदको काम महत्वपूर्णं विधेयकहरुमाथि छलफल गरि पारित गर्ने पनि हुन्छ । तर, विधेयक अधिवेशनमा नै कैयौं जरुरी विधेयकहरु समेत प्रस्तुत र पारित गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ ।
अहिले प्रश्न उठेको छ, सेतो हात्तीरुपी संसद किन चाहियो ? यस्तो संसद विघटन नगरेर किन राखिराख्ने ? बरु यस्तो निकम्मा संसदको विकल्पमा देशका सबै स्वतन्त्र, स्वविवेकी, स्वनिर्णयी, स्वाभिमानी, स्वाधीन राजनीतिक शक्ति र जनसमुदायहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नयाँ सर्वोच्च अन्तरिम राष्ट्रिय जनप्रतिनिधि सभा गठन किन नगर्ने ? जसले देशको हित र जनहितमा प्रतिबद्ध भएर एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरु खारेज गरेर आफ्नो मातृभूमिप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्न सकोस् ।
यस्तै, यो सरकारको विकल्पमा मूलतः भारतीय डिजाइनमा प्रतिपक्षहरुलाई उचालेर गठन गराउन लागिएको सम्भावित ‘कम्फर्टेबल’ सरकार पनि किन पो बनाउने र ? जब कि यो पनि उनै बाह्य शक्तिको कसिलो र दरिलो आड बनेर नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका हक–हित, शान्ती–मैत्री र मुक्ती–प्रगति विरोधी छ भने । कम्फर्टेबल सरकार पनि राष्ट्र र जनताको पक्षमा देखिन्न । त्यसैले यस्तो सरकारको पनि के दरकार ? तसर्थ यसको पनि औचित्य छैन र बन्न दिनु नै हुँदैन । बरु यसको विकल्पमा अर्को एउटा देशभक्त, सच्चा लोकतन्त्रवादी, प्रगतिशील, वामपन्थी र कम्युनिस्टहरुको संयुक्त क्रान्तिकारी राष्ट्रिय सरकार बनाउनु पर्छ । जसले नेपालको सच्चा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र अखण्डताको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नेछ । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसनखोरी, राजस्वछली, घुसखोरी, दलाली, कालोबजारी, गुन्डागिरी, चन्दागिरीलाई निर्मूल गरेर सुशासन, शान्ती, सुव्यवस्था, सुख र समृद्धी दिन सक्नेछ । त्यसैले अहिले तत्काल नै यो ओली सरकारको विकल्पमा एउटा अन्तरिम राष्ट्रिय क्रान्तिकारी सरकार गठन गरेर अघि बढ्नु जरुरी देखिन्छ ।
विकसित मुलुकहरुमा समेत चल्न नसकेर समाजवादका कैयौं विशेषताहरु समावेश गरेर मात्र बल्लतल्ल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था टिकाईएको छ । जुन नेपालजस्तो अविकसित, पछौटे, अर्धसामन्ती र अर्धऔपनीवेशिक अर्थात् पुँजीवादी आर्थिक–सामाजिक आधार तयार नभएको वर्तमान नेपाली समाजमा फिट हुन सक्दैन् । यो बारम्बार संकटग्रस्त बन्दै गएर आर्थिक, सामाजिक र मानसिक धरातलमा पनि अफाप र असफल सिद्ध भईसकेको छ । यसले नेपाल र नेपालीका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्याहरु हल गर्नुको साटो झनै उल्झाउँदै, बल्झाउँदै र चर्काउँदै लगिरहेको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थामा के अझै पनि नेपाली जनता लुटपुटिने, गुटमुटिने र दुःखी, दरिद्र र द्रवित भैरहने अवस्था देखिन्छ ।
हैन भने यस्तो जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी र क्रान्तिविरोधी दलाल संसदीय व्यवस्थालाई अब पनि कति र किन राखिराख्ने ? बरु यसको सट्टामा हावापानी र माटो अनुकूलको अर्थात् नेपाली विशेषता र मौलिकतामा आधारित, आर्थिक–सामाजिक र सांस्कृतिक धरातलबमोजिमको वस्तुवादी र वैज्ञानिक समाजवाद उन्मुख नयाँ मोडेलको अन्तरिम व्यवस्थाको परिकल्पना, विकास र प्रयोग गरौं । जसले अस्थिरता, अराजकता र अस्तव्यस्तता अनि भाँडभैलो, भद्रगोल र भ्रष्टीकरणलाई बढाउने यो भ्रष्ट र दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकृतिबाट देशलाई मुक्ती र निकास दिन सक्छ । त्यसैले अविलम्ब व्यवस्थाकै विकल्प रोजौं ।
समग्रमा अहिले देशमा विवादित, विकृत र विसङ्गत मुख्य राजनीतिक अङ्गहरु संसद, वर्तमान वा भावी संसदीय सरकार र संसदीय व्यवस्थालाई निषेध गरेर वर्तमान संसदको स्थानमा नयाँ सर्वोच्च अन्तरिम राष्ट्रिय जनप्रतिनिधिसभा गठन गरौं । वर्तमान ओली सरकार र सम्भावित चर्चित कम्फर्टेबल सरकारलाई विस्थापित गरेर तिनको स्थानमा नयाँ संयुक्त र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अन्तरिम सरकार बनाऔं । र, वर्तमान दलाल र भ्रष्ट पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई अब सदाको लागि निषेध गरेर नेपाल र नेपालीको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्ने देशानुकूल र युगानुकूल समाजवाद उन्मुख नयाँ क्रान्तिकारी राष्ट्रिय जनव्यवस्थाको मोडेल तयार गरी लागू गरौं ।
नेपाल र नेपाली प्रती जिम्मेवार र जवाफदेही यस्तो जनप्रतिनिधिसभा, जनसरकार र जनव्यवस्थाले मात्र नेपाल र नेपालीको हक र हितको ग्यारेन्टी गर्नेछ । तसर्थ उक्त तीन अङ्गको तत्काल विकल्प खोजौं । बारबारका बिकराल संकटहरुबाट देशलाई सधैका लागि मुक्त गरौं । स्वयंप्रति चेतना र विश्वास भया ! नेपाल र नेपालीप्रति माया भया !